Oko Ukwenza Xa Unayo Imboniselo
Yintoni oyenzayo ngeeMboniso zakho
Indlela yokusingatha iMibono yakho yeZenzo zexesha elizayo, Enkulu okanye Encinci
Kwiiveki ezilandelayo ziganeko ezimbi zangoSeptemba 11, 2001 , abaninzi abantu bathi babenobungqina bokuhlaselwa kweentsuku okanye iiveki ngaphambi kolo suku olubi. Ingxaki ngobuninzi beemeko ezixeliweyo azingabhalwanga. Nabani na onokuthi baye bafumana isilathiso malunga nokuphazamiseka kwesitimela, isiphumo seSigqeba sehlabathi, okanye esinye isiganeko emva kwe nyaniso. Okubangela ukuba bafanele ukuqwalaselwa ngokukrakra bubungqina bokuba ngokwenene wayenomdla wokuqala phambi kwesi siganeko.
Iimboniso zeZenzo eziqhelekileyo nezingavamile
Iimboniso zivakalelwa kukuba into ethile iya kwenzeka - ichaza kwangaphambili. Uninzi lwabantu luye lwafumana izibhengezo kwizinga elinye okanye elinye. Ifowuni igcina kwaye "uyazi" ngubani obizayo, nangona ikhwelo yayingalindelekanga. Ngamanye amaxesha umboniso awukodwa nje, kodwa unamandla okanye unamandla. Mhlawumbi uvakalelo olukhulu, olungachazwanga lusizi luye lukukhathaza yonke imini. Kuphela emva koko ufunda ukuba isihlobo esiseduze sife.
Kukho amaninzi amaninzi esiwafumanayo ngoku kunye, kwaye ngamanye amaxesha (abantu abangathembeki bayakuhlala bethetha njalo) banokuthi bangabangelwa ngengozi nje. Abanye bathi akukho nto enjengokungalingani, kodwa esinye sihloko.
Kukho amaxesha, nangona kunjalo, xa umboniso unamandla kangangokuba lowo ufumanayo unokungathandabuzeki ukuba kuya kwenzeka. Ezi mboniso ezinamandla zininzi kakhulu kodwa zenzeke ngokukhawuleza ukuba abanye abaphandi abathandekayo bakholelwa ukuba bangokoqobo.
Abanye abantu babonakala bekhathalele ezi ntlobo zeemvakalelo kwaye banokuthiwa "izivakalisi" okanye " iingqondo ."
Le mvakalelo inamandla kakhulu kwizihlobo eziseduze, apho ubopheko lwengqondo lubonakala luqine. Kwaye ukuba le nkulumo "yezibophezelo zengqondo" ikukhupha njengento efana neNew Age Age gobbledygook, cinga ukuba ezinye izazinzulu eziqhelekileyo - iifomic physic and psychiatrists ngokufanayo - ziqonda ngakumbi nangakumbi ukuba bonke abantu baxhamle.
Iimboniso zingabonakali njengento yokuzilahla okanye inokuba yinto ephazamisayo kangangokuthi ikukhupha ngaphandle kwenkqubo yakho yemihla ngemihla kwaye ikukhusele ekubeni ungacingi ngenye into. Zingakwazi ukucaca, akukho nto engaphezu kwesimo, okanye zikwazi ukucaca ukuba abanye abavelele bafana nokubukela ifilimu. Iimboniso zikwazi ukuxela into eyenzeka ngcaciso emininzi kamva ... okanye iiveki okanye eziliqela emva kweenyanga. Baya kufika xa wenza izitya okanye bafike ngamaphupha.
Unayo Imboniselo, Ngoku Yintoni?
Ukuba ulungelelaniso kwiimboniso ezihlala zizalisekile, okanye unesiqalo esinamandla malunga nesiganeko esizayo, kufuneka usibhale. Isiboniso esingabhalwanga ngombhalo ongekho sikhombiso kwaye asinakukholelwa.
Mhlawumbi awunakufuna ukumbhala yonke into emfutshane. Enyanisweni, akunakwenzeka ukuba ubhale ezinye zazo: umzekelo, ukuba umnxeba oza kumaminithi emibini emva kokubhengezwa kwakho.
Hlola lo mzekelo wokubhala umboniso. Nangona ungathethi naye kwithuba elithile, ubenomboniso okanye iphupha elicacileyo ukuba udade wakho ufumane utshintsho olukhulu lobomi - ngandlela-thile uyazi ukuba ukhulelwe. Lo ngumzekelo omnye, kunjalo; i-premonition ingaba nayiphi na into - ukuphazamiseka kwendiza, ingozi ephathelele isihlobo, okanye inhlekelele yendalo.
Ngoko uyibhala njani indlela yakho yokumisela? Kukho iindlela ezininzi:
Gcina idayari. Fumana iphepha lokubhala uze ubhale phantsi naziphi na izibhengezo onokuba nazo. Qiniseka ukuba uqaphela ixesha kunye nomhla owawufumana ngawo. Ubuthathaka kule ndlela, ngokubhekiselele ekuqinisekiseni kwabanye, kukuba idayari ezinokuthi zitshintshwe kwaye zitshintshwe-ukubeka ingqalelo phambi komhla wesiganeko esenzekile. Ixabiso ledayari , ngokucinga ukuba unyanisekile, kukuba unerekhodi lomntu ozibonisayo, izinga lokuphumelela onokuyilandela.
Xelela abanye. Musa ukugcina iimboniso zakho ziyimfihlo. Ngeke ufune ukuba ngumthwalo onxunguphayo ngokusebenzisa i-haranguing bakho abahlobo kunye nantoni yonke into enokuyenza, kodwa ukuba ucinga ukuba kunokuthile okubalulekileyo, xelela umntu othembayo. Esinye isiqalo sobungqina. Ukusebenzisa umzekelo ongasentla, ngokuqinisekileyo ufuna ukumangaliswa udade wakho uMariya kunye nesibonelelo sakho ngokukhulelwa kwakhe ngaphambi kokufumana ithuba lokukuxelela. Ubuthathaka kule ndlela kukuba, nayo, incike ekunyanisekeni kwabantu kwaye ngezinye izikhumbuzo eziphosakeleyo. Ukusebenzisa i-imeyile kunokuba ngcono. Nangona i-imeyile ingatshintshwa, i-date-stamped date.
Sebenzisa indawo yenkomfa. Indlela eyona ndlela yokubhala i-premonition yakho kwindawo echanekileyo yinto engekho ekulawuleni kwakho. Unokufuna ukusebenzisa iProductions Project okanye i-database efana nayo ukufaka isimemo sakho.
Ezi ndlela zinikeza ubungqina obunelisayo kunye nobungqina obumiselweyo ngomhla wokubanjwa kwakho.
Yiba ngokucacileyo kwiimboniso zakho
Kungakhathaliseki ukuba yiziphi iindlela ozisebenzisayo, gca ngokucacileyo kwenkcazo yesibonelelo sakho, kubandakanywa ezininzi njengoko ungakhumbula. Ngamanye amaxesha kunzima ukuchaza iimvakalelo kodwa yenza okusemandleni akho. Chaza indawo, abantu, amagama, iimpawu zomhlaba, imilo, imibala, ukuvumba, ukushisa, kunye neemvakalelo ozivelayo. Qaphela ukukhawuleza iinkcazo zakho ngezinto ongaziqondi. Ufuna ukuchaneka nokunyaniseka kunokwenzeka.
Ukuba ukholelwa ukuba umboniso wakho uzalisekile, yinyaniseka malunga naloo nto. Akunakuba yi-100 ekhulwini echanileyo, kodwa kufuneka kubekho iinkcukacha ezichanekileyo ukuqinisekisa ubungqina bakho. Le yilapho ingxelo yakho eneenkcazo ifika khona. Ukuba uthe nje, "Ndiyazi ukuba isitimela sichitha kwindawo ethile empuma ye-US ..." ukuthembeka kwakho kuya kwehla ngenxa yokuba, ngelishwa, malunga nesonto lonke kukho isitimela esaphazamiseka kwindawo ethile kwimpuma ye-US Kungenzeka ukuba isiganeko siza kwenzeka, ngaphantsi kwepropress yakho engacacanga iya kuthathwa.
Ungavumeli ukuba izibhengezo zakho zithinte. Ubungqina obuninzi obunokuqinisekiswa esinalo bolu hlobo, sisondele ngokuya kukuqonda.
Iidayari Zokufa: 6 Abantu Ababethetha Ngobubele Ukufa Kwabo
Ngaba iPreodactyl Imbonakalo Yenene? Malunga nePterosaurs
Ukudibanisa nabantu baseShadow
Isizathu sokuba Uphephe ukudibanisa noMnumzana uDonon Zozo
Ukubukwa kweChupacabras - Iindaba eziNyaniso
I-Pick Picks - Iimifanekiso eziPhambili eziPhezulu ezili-10
Konke malunga neMiboniso kunye nendlela yokuSebenzisa
Iintlobo ezahlukeneyo zePencilite Pencil
Imibuzo Yokubuza Ngaphambi Kokuthenga okanye Zama Ithebhile Yesixhobo
Wazalelwa eCanada, Ngaba uTed Cruz angabaleka kuMongameli?
Indlela Yokukhanga Umntu WeCapricorn
I-Lotus Flower yaseTshayina
Kuphi Intsimbi Efunyenwe KwiTable Périodic?
Ukuqhagamshelana neNgelosi Yakho: Imiyalezo enomsindo
Ukuthetha ngeMfundo ekhethekileyo Abazali
Indlela Yokufumana Iingcamango Ezingundoqo
Ubungqina beVangeli likaMarko: Ngubani uMarko?
Iingcebiso eziPhambili ze-Poker ezili-10 zokukwenza ube ngumdlali ongcono
Imbali kunye neMigaqo yeZizwe eziManyeneyo
Isikhokelo soBoniso kwiintlobo zeeKhuthuthu
Ukubhala i-Annotated Bibliography yePhepha
UGutave Eiffel kunye ne-Eiffel Tower
IsiNgesi 'sikhulu' KunesiSpeyin - Ngoko-ke?
Inkulu Inkcazo kwiKhemistry
Ziziphi Izinto Esingazifundisayo
Uluphi Uhluko phakathi kweSodium neTyuwa?
Eleanor's Children's and Aqualine's Children
Uluhlu lweeNkalo: Isingeniso
Iingqungquthela ezivusa iAmpumn ekhazimulayo
UMongameli waseMzantsi Afrika u-Trevor Noah ufumana 'iMiboniso yemihla ngemihla'
6 - Abathandi